Mofon’aina – ALAROBIA 17 JANOARY 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAROBIA 17 JANOARY 2018
17 janoary 2018
19 Ary Jesoa namaly azy hoe: Ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo? Mandra-pahoviana no handeferako aminareo? Ento etỳ amiko izy.20 Dia nentiny teo aminy izy; fa nony nahita an’ i Jesoa izy, dia nampifanintontsintona ny tenany niaraka tamin’ izay ny fanahy. Dia lavo tamin’ ny tany izy sady nitsinkasinkasina sy nandoa vory.21 Ary Jesoa nanontany an-drainy hoe: Hoatrinona izay no nahatongavan’ izao taminy? Ary hoy izy: Hatry ny fony izy mbola zaza.22 Ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy hamonoany azy; fa raha mba misy hainao, dia mamindrà fo aminay, ka vonjeo izahay.23 Fa hoy Jesoa taminy: Hainao hoe? Ny zavatra rehetra dia hain’ ny mino.24 Ary niaraka tamin’ izay dia niantso ny rain-drazazalahy ka nanao hoe: Mino aho; vonjeo mba ho afaka amin’ ny tsi-finoako.25 Ary nony hitan’ i Jesoa fa nihazakazaka nanatona azy ny vahoaka, dia niteny mafy ny fanahy maloto Izy ka nanao taminy hoe: Ry fanahy moana sy marenina! Izaho mandidy anao: Mivoaha aminy, ka aza miditra ao anatiny intsony.26 Ary rehefa ninananana izy sady nampifanintontsintona mafy ilay zazalahy, dia nivoaka taminy; ary efa toy ny maty, ka dia nataon’ ny maro hoe: Maty.27 Fa Jesoa nandray ny tànany ka nanarina azy; dia nitsangana izy.
MARKA 9 :19-27
MANANA FAHEFANA HAHASITRANA NY ARETINA REHETRA NY TOMPO
Nisy olona nitondra ny zanany azom-panahy moana sy marenina teo amin’ny mpianatra mba hositranina, nefa dia nahagaga fa tsy nahasitrana azy ireo . Nambaran’ny rain’ilay marary tamin’i Jesoa izany toe-javatra izany. Ary dia nositranin’i Jesoa ny marary ka sitrana tokoa. manapaka amin’ny fahefany ny Tompo ka afaka manasitrana na dia izay aretina tsy hain’ny olona sitranina aza.
Zava-dehibe ho an’ny marary sy ny fianakavian’ny marary ny hahazoana fahasitranana. Ary izany no mahatonga antsika tsy hitandro vola aman-karena , mivezivezy mitety toeram-pitsaboana samy hafa , eny tonga hatrany amin’ny mpimasy sy ny mpisikidy aza ny mpivavaka sasany …Tsotra ny Tenin’i Jesoa : « Ento ety amiko izy » (and 19d) .Ento ho eo amin’i Jesoa ny aretinao rehetra , ento ho eo Aminy ny marary , manana fahefana hahasitrana Izy .
Ny aretin-janany no nahatonga an-dralehilahy hanatona an’i jesoa , kanefa rehefa tonga teo amin’i Jesoa dia hita fa samy narary izy mianaka , ary ny aretin’ny rainy aza no ratsiratsy kokoa . Tsy inona izany fa ny tsy finoana. Izany indrindra no mahatonga an’i Jesoa hiteny hoe: « Ry taranaka tsy mino » (and 19), « ny zavatra rehetra dia hain’ny mino » (and 23). Nalahelo mafy noho ny tsy finoany ilay lehilahy ka nangataka tamin’i Jesoa nanao hoe: « vonjeo aho ho afaka amin’ny tsy finoako » (and 24) . Ianao koa , minoa an’i Jesoa dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao .
Moa misy aretina tsy hain’ny Tompo sitranina ve?